Disney + haishande paLinux pakuburitswa | Linux Vakapindwa muropa
Makore mazhinji apfuura, makore mazhinji zvekuti ini ndichiri kushandisa Windows neInternet Explorer, munhu wekutanga akandiudza nezveLinux akandiudza nyaya: akaedza kupinda muwebhusaiti neFirefox, akatadza, akavatumira email vachikumbira tsananguro, vakapindura kuti «bhurawuza rako ishoma»Uye akapindura kuti«bhurawuza rangu nderimwe rinonyanya kushandiswa. Kana iwe uchingotsigira Internet Explorer, izvo zvisingakwanisike webhusaiti yako«. Kubva ipapo, pese pandinoverenga chimwe chinhu senge iyi nhau kubva Disney + Ndinoyeuka iyo nyaya.
Disney ichangobva kuburitswa yako yekushambadzira zvemukati sevhisi Uye, seApple TV +, zvinodarika zvemakwikwi mutengo. Ichi chingave chimwe chezvikonzero nei tasarudza kunyorera kuDisney +, asi chimwe chikonzero chekurega kudaro ndechekuti, izvozvi izvozvi, hazvipindirani neLinux. Mamwe masevhisi akadai seNetflix kana Hulu anoshanda pamakomputa edu, asi iyo digital rights management Disney (DRM) ine yakawanda chengetedzo uye inoda kuita shanduko kuti tikwanise kuishandisa muChannel kana Firefox paLinux.
Disney + inoshandisa yakachengeteka DRM
Kana mushandisi akaedza kuwana Disney + kubva kuFirefox kana Chrome paLinux, ivo vanozoona yambiro inoratidza iwo mavara "Error Code 83", zvinoreva kuti mamiriro ekusimbisa epuratifomu hazvienderani nedziviriro nhanho. Mamwe masevhisi akadai seNetflix kana Amazon Vhidhiyo anoshanda zvakakwana, asi nekuti anoenderana nemaraibhurari Widevine. Dambudziko nderekuti mabhurawuza eLinux anongotsigira Widevine Level 1 uye Disney + inoda mwero wepamusoro wekuchengeteka.
Kupera kwenyaya iyi kunongofunga nezve mukana mumwe chete: tinogona kushandisa Disney + paLinux. Mubvunzo ndewekuti riini. Imwe nguva yapfuura, mabhurawuza mazhinji akange asingaenderane nekuburitswa kwezvakachengetedzwa zvemukati uye ikozvino mazhinji acho anotibvumidza kunakirwa Netflix, zvakare paLinux. Iye zvino zvinongoramba zviripo kuti vaone pavanosvika pabasa kuti vashandisi veLinux vagone kushandisa zano raDisney. Chero zvazvingaitika, zviri pachena kuti ini handina kuchinjira kuWindows pane izvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Disney + haishande paLinux panguva yekuburitswa kwayo. Zvinoshamisa sei "!
Torrent ichiri kushanda paLinux, handiti? Zvakanaka izvo. Chero bedzi ivo vasingatipe zvimwe sarudzo, kuti uenderere mberi nezvinyakare.
Ndinoyeuka makore mazhinji apfuura ndamboverenga chinyorwa umo zvakanzi Disney yaipesana zvachose neFree Software, kuti kune iyi nyika dzakawanda yaive muvengi zvishoma pane kurwa uye zvinonzwisisika kunyangwe mune zvimwe zviitiko zveimwe yeicho chaicho varaidzo akateedzana evachiri kuyaruka, ndinofunga ndinorangarira izvo mu ¿La de Los Magos de Waberly? Mune iyo sainzi yemakomputa, mudiki, akataura kuti paive nechikamu cheyakaipa yakavhurwa sosi yekubvisa.
Tichiri kumirira chimwe chinhu cheLinux mushure mekuziva matungamire ari kuita tsika nemagariro?
Kunyangwe vazukuru-vazukuru havazozviona paLinux.
Uye zvino Pstrong anoshanda nei? Iine Linux, kunyanya naDebian? yemahara uye naRenderman iri munzira yekuva nyoro yemahara
Ubuntu anotendeuka gumi nemashanu. Ipfupi nhoroondo yezvinonyanya kukakavara pane zvakagoverwa